टोकियो ओलम्पिक | Nepal Flash
काठमाडौं । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । अब ३३औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आगामी तीन वर्षपछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुनेछ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सन् २०२० मा आयोजना हुनुपर्ने टोकियो ओलम्पिक एक वर्ष...
१६ दिन लामो खेलकुदको महाकुम्भ टोकियो ओलम्पिकका खेलहरू सकिएका छन् । ओलम्पिकमा अमेरिका पहिलो स्थानमा आएको छ भने चीन दोस्रोमा । आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा आउँदा बेलायत चौथो र रसियन ओलम्पिक कमिटीले पाँचौँ स्थानमा ओगटेका छन् । प्रतियोगिता सुरुवातका चार...
भारतलाई स्वर्ण दिलाउने निरज चर्चामा, पुरस्कार र सम्मानको ओइरो
ट्रयाक एन्ड फिल्ड अन्तर्गत ज्याब्लिङ थ्रोमा भारतलाई पहिलो ओलम्पिक स्वर्ण दिलाएका निरज कुमारको यतिबेला भारतमा चर्चा भएको छ । भारतका लागि ओलम्पिकको इतिहासमा दोस्रो र ट्रयाक एन्ड फिल्डमा पहिलो स्वर्ण स्वर्ण जितेका निरजले फाइनलमा ८७.५८ मिटर थ्रो गर्दै नयाँ इतिहास...
सकिँदै टोकियो ओलम्पिक, शीर्ष स्थानमा अमेरिका
टोकियो ओलम्पिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । तर त्यो अन्योललाई चिर्दैविश्व खेलकुदको महाकुम्भआज समापन हुँदै छ । १६ दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा अमेरिका पदक तालिकामा च्याम्पियन बन्यो । प्रतियोगिता सुरु भएको चार दिनसम्म जापान शीर्ष स्थानमा रहेको थियो ।...
ओलम्पिक बास्केटबलमा अमेरिकालाई १६औं पटक स्वर्ण
काठमाडौं । अमेरिकाको पुरुष बास्केटबल टिमले लगातार चौथो पटक ओलम्पिकमा स्वर्ण जितेको छ । जापानमा भयरहेको टोकियो ओलम्पिकअन्तर्गत पुरुष बास्केटबलको फाइनलमा फ्रान्सलाई पराजित गर्दै अमेरिकाले स्वर्ण जितेको हो । साइटामा एरिनामा शनिबार भएको फाइनलमा अमेरिकाले फ्रान्सलाई ८७-८२ अंकले हरायो ।...
ओलम्पिकमा चीन अग्रस्थानमा, पछ्याउँदै अमेरिका (पदकतालिकासहित)
टोकियो ओलम्पिकमा पाँच दिनदेखि लगातार चीनको अग्रता कायमै छ । शुक्रबारको खेल सकिँदासम्म चीनले ३० स्वर्णसहित ७९ पदक हात पारेको छ । चीनले २६ वटा रजत र १८ वटा कास्य पदक जितेको हो । चीनलाई पछ्याइरहेको अमेरिकाले ३१ स्वर्ण जितिसकेको...
टोकियो ओलम्पिक : यस्तो छ पदकतालिका ?
टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकाको पहिलो स्थानमा चीन रहेको छ ।दोस्रोमा अमेरिका र तेस्रोमा जापान रहेका छन् । (अपडेट : साउन २०गते बिहीबार राति ९:०३बजे।) क्रस देश स्वर्ण रजत कास्य जम्मा १ चीन ३४ २४ १६ ७४ २ अमेरिका २९ ३५...
पुरुष हकीमा भारतलाई ऐतिहासिक पदक, मोदीले गरे यस्तो ट्विट
काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिक २०२० मा भारतले पुरुष हकीमा कास्य पदक जितेको छ । जर्मनीलाई ५ ४ ले हराउँदै भारतले कास्य पदक जितेको हो । भारतले सन् १९८० मा मस्को ओलम्पिकमा हकीमा स्वर्ण पदक जितेको थियो । त्यसयता भारत हकीमा...
यस्तो छ टोकियो ओलम्पिकको पदकतालिका
टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमाचीन कायमै रहेको छ । अमेरिका र जापान क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । ६ वटा मुलुकले दोहोरो अंकमा स्वर्ण जितेका छन् भने पदक हात पार्ने देशको संख्या ८५ पुगेको छ । (अपडेट : साउन २०गते...
१२ वर्षीया बालिकाले जितिन् ओलम्पिकमा रजत
टोकियो । जापानले स्केटबोर्डिङतर्फ मंगलबार राति आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्यो । यस इभेन्ट्समा आयोजक जापानकी १९ वर्षीया साकुरा योसोजुमीले ६०.०९ अंक स्कोर गर्दै स्वर्ण जितिन् । त्यसैगरी १२ वर्षकी कोकोना हिराकीले ५९.०४ अंक स्कोर गर्दै रजत जितिन् । यससँगै हिराकी...
ब्राजिल र स्पेन ओलम्पिक फुटबलको फाइनलमा
काठमाडौं । जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिक २०२० अन्तर्गत पुरुष फुटबलको स्वर्णका लागि ब्राजिल र स्पेन भिड्ने भएका छन् । मंगलबार भएको सेमिफाइनलमा ब्राजिलले मेक्सिकोलाई र स्पेनले जापानलाई पराजित गर्दै फाइनल भेट पक्का गरे । ब्राजिल साविक विजेतासमेत हो । लगातार...
टोकियो ओलम्पिक: चीनको अग्रता कायमै, अमेरिका दोस्रो र जापान तेस्रो स्थानमा
टोकियो ओलम्पिकमा चीनले आफ्नो अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । चीनले मंगलबार ३ स्वर्णसहित ७ पदक थपेको हो । जारी ओलम्पिकमाचीन३२ स्वर्ण, २१ रजत र १६ जितेर पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको अमेरिकाले अहिलेसम्म २४स्वर्ण र २७रजतसहित ७२पदक जितेको...
टोकियो ओलम्पिकमा कसको पदक कति ?
टोकियो ओलम्पिकमा चीनले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिएको छ । चीनले सोमबार ९ स्वर्ण थपेर २९ स्वर्ण र १७ रजतसहित कुल ६२ पदक हात पारेको छ । दोस्रो स्थानको अमेरिकाले अहिलेसम्म २२ स्वर्ण र २५रजतसहित ६४पदक जितेको छ । तेस्रो जापानले...
टोकियो ओलम्पिकमा चीनले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । अहिलेसम्म सकिएका खेलमा चीनले २० स्वर्णसहित ५१ पदक जितेको छ । चीनले १४ रजत र १३ कास्य हात पारेको छ । दोस्रोमा रहेको अमेरिकाले २० स्वर्ण र २३ रजतसहित ५९ पदक...
ओलम्पिकमा सात पदक जित्ने महिलामा अस्ट्रेलियाकी एम्मा मेक्केन
अस्ट्रेलियाकी एम्मा मेक्केनओलम्पिकमा सात पदक जित्ने पहिलो महिला खेलाडी बनेकी छिन् । मेक्केनलेआज भएको महिला ५० मिटर फ्री स्टाइलमा स्वर्ण जित्दै यो सफलता प्राप्त गरेकी हुन् । टोकियो एक्वेटिस्क सेन्टर भएको प्रतिस्पर्धामा उनले २३ दशमलव आठ एक सेकेन्डमा दूरी पुरा...
जमैकाका तीन धाविकाले जिते १०० मिटर दौडमा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक
जमैकाकी इलानी थम्पसन हेरालेटोकियो ओलम्पिकमा १०० मिटर दौडको स्वर्ण जितेकी छिन् । जमैकाकी यी धाविकाले २०१६ मा रियो ओलम्पिकमा पनि यो स्वर्ण जितेकी थिइन् । यसपटक उनले स्वर्ण जित्ने क्रममा आफ्नै देशकी सेली एन फ्रासर प्राइसलाई पछि पारिन् । २९...
ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै, दोस्रोमा जापान (पदकतालिकासहित)
टोकियो ओलम्पिकको पदकतालिकामा चीनले अग्रता कायमै राखेको छ । आज शनिबारचीनले २ सहित ८ पदकमाबाजी मारेको छ । उसले कुल २१ स्वर्ण, १३रजत र १२कास्यसहित ४६पदक जितिसकेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको आयोजक जापानले आज स्वर्ण थप्न सकेन ।जापानले १७स्वर्ण...
स्टार खेलाडी जो ओलम्पिकमा फ्लप भए
टोकियो ओलम्पिकको तरंग विश्व खेलकुदमा छाइरहेको छ । सञ्चारमाध्ययममा स्वर्ण, रजत र कास्यजित्ने खेलाडी र देशको नाम सूचीसहित आइरहेका छन् । कतिपय खेलाडीले इतिहास कोरिरहेका छन् भने कतिपयले रेकर्ड तोड्ने र बनाउने गरिरहेका छन् । यस्तैमा टोकियो ओलम्पिककेही विश्वचर्चित खेलाडीहरुका...
अमेरिकन पौडीबाज ड्रेसलले जिते विश्व कीर्तिमानसहित स्वर्ण
टोकियो । अमेरिकन पौडीबाज सेलेब ड्रेसलले जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिकमा १०० मिटर बटरफ्लाईमा नयाँ विश्व कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका छन् । शनिवार भएको फाइनलमा उनले ४९.४५ सेकेण्डको टाइमिङ निकाल्दै स्वर्ण जिते । उनले सन् २०१९ को वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा आफैंले बनाएको ४९.५०...
टोकियो ओलम्पिकमा चीन शीर्ष स्थान ओगट्न सफल
काठमाडौं । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन ४० पदकसहित शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । जापान र अमेरिकालाई उछिन्दै चीन शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएको हो । चीनले हालसम्म १९ स्वर्ण, १० रजत र ११ कास्य पदक...